Bodström oo Fasax Loo Diiday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Thomas Bodström, wasiirkii hore ee cadaaladda dawladdii Persson.
Bodström får inte ledigt från riksdagen
Bodström oo Fasax Loo Diiday
La daabacay onsdag 13 oktober 2010 kl 19.11
Wasiirkii hore ee cadaaladda Thomas Bodström, ahan xubin ka tirsan xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga ayaa la sheegay in aan loo ogolaan doonin codsigiisii la xiriiray fasaxa dhallaanka, sida uu sheegay hogaamiyaha xildhibaannada baarlamanka kaga jira xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga Sven-Erik Österberg.
Bodström ayaa fasax u dalbaday mid ka mid ah dhallaankiisa muddo uu fasax ugu maqan yahay isaga iyo reerkiisa dalka Mareeykanka. Gelinkii hore ee maanta ayey middaa kulan ka yeesheen af-hayeenka baarlamanka iyo madaxda xildhibaannada baarlamanka kaga jira xisbiyada.
Heeyadda ceeymiska war laga soo xigtay ayaa sheegaya in Bodström uu xaq u leeyahay oo keliya fasax 20%. Sida caadiga ayuu baarlamanku xadeeyaa fasaxyada mushaar la'aanta ah.
- madaxda kooxaha xildhibaannada baarlamanka ee xisbiyada ayaa middaa ka soo hor-jeestay in fasaxaa la ogolaado, maadaama aan fasaxa badankii ahayn mid dhallaan loo qaatay, islamarkaana lagu qaato dhaqaalaha dhallaanka marka hooyga lagu hayo. Qeeyb ahaanna looma fasax-qaato, sidaa daraadeed ayuu fasaxani bannaanka ka yahay caadooyinka, sida go'aanka lagu gaaray. Warsaxaafeed ka soo baxay af-hayeenka baarlamanka Per Westerberg, laguna soo daabacay bogga internetka ee baarlamanka.